★မြန်မာ့အလင်း★: ဒီမိုကရေစီကိုအလိုချင်ဆုံးက မွတ်ဆလင်သာဖြစ်တယ်
သခင်ကိုမောင်ဦးဆီပုံးမှာတင်ပြနေတဲ့ ဒီဗီဒီယိုလင့်ကို ပြန်လည်တင်ပြချင်းဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်နဲ့ ဒီမိုကရေစီဟာ လားလားမှ မဆိုင်ပါဘူး။ သူတို့ဟာ အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုသာ အားပေးထားပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်မှုကို အန္တာရယ်အဖြစ်မြင်ထားတဲ့ဝါဒဆိုးကြီးပါ။ မိုဟာမက်ကိုယ်တိုင်သူ့ကိုဝေဖန်သူကို ခြေဖြတ် လက်ဖြတ်နဲ့ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ခဲ့ပါတယ်။ သမိုင်းမှာလဲ စအိုပေါက်မုဒိမ်းကျင့်နည်းနဲ့ မွတ်ဆလင်ပျံ့အောင် လုပ်ခဲ့တာပါ။ အင်တာနက်ခေတ်ကြီးမှာတောင် မွတ်ဆလင်ကနေ ဘယ်သူ့ကိုမှ လွတ်လပ်စွာထွက်ခွင့်ပေးရဲတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မွတ်ဆလင်တွေဟာ ဒီမိုကရေစီလိုချင်တဲ့ စာရင်းထဲမှာ ထိပ်ဆုံးမှာပါနေပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်တွေကို လေးစားလို့ . . . ဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလွတ်လပ်ခွင့်ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး မွတ်ဆလင်ဝါဒဖြန့်ဖို့သာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ကောက်ကျစ် စဉ်းလဲမှုလုပ်နေတာပါ။ အထက်ကဗီဒီယုမှာလဲ ကုလားတွေဟာ UK ပါလီမန်ကို သိမ်းပိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကို ၀န်ခံထားတာ တွေ့ရမှာပါ။ ထို့အတူပဲ အဲဒီဗီဒီယိုရဲ့ ကော်မန့်မှာ ကုလားတွေဟာ သူတို့ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ကော်မန့်တွေကို ဖတ်မရအောင် လုပ်ထားတာကို သတိထားရင် သိနိုင်ပါတယ်။
ကျုပ်တို့အနေနဲ့ ကုလားကိစ္စမှာ နအဖနဲ့ ဒီမိုတွေကို အားကိုးလို့ရမှာ မဟုတ်ပါ။ အခုဆိုရင် မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ရေးဟာ အရှိန်ကျလာပါပြီ။ အမာခံဆိုသူတွေကလည်း တစ်လထက်ပိုပြီး မမြဲပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ . . .ကျုပ်တို့ ဘလော့ကို တိတ်တိတ်လာ.. တိတ်တိတ်လေးထွက်သွားတယ် ဆိုတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တော့။ ကျုပ်တို့ တွေဟာ စောက်တင်းပြောလိုတဲ့ ဆန္ဒကြောင့်ဒီဘလော့ကို ထောင်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာအားလုံး တာဝန်သိစိတ်နဲ့ အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့် တိုင်းပြည်အတွက်လုပ်စေချင်လို့ပါ။ မွတ်ဆလင်ကိုအမြစ်ဖြုတ်ရေးကို ကူညီကြပါ။ အောက်က ဘလော့တွေက ဆီပုံးတွေမှာ နေ့စဉ်… မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ရေးစာတွေကို ရေးသားပေးကြပါ။ တနေ့နဲ့တနေ့ စာသားတွေထပ်နေလဲ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ အဓိကလိုအပ်ချက်က မွတ်ဆလင်ဝါဒကို မုန်းတီးကြောင်းနဲ့ အလိုမရှိကြောင်းကို ထုတ်ဖေါ်ဖို့ပါ။ အဲလို ရေးသားပေးခြင်းကြောင့် လူထုအတွင်းမှာ မွတ်ဆလင်ရဲ့အန္တာရယ်ကို ပိုပြီး သတိထားလာမှာပါ။ စာရိုက်ဖို့ အဆင်မပြေရင်.. ကြွေးကြော်သံတချို့ကို ရေးပြထားပါတယ်။ အဲဒီစာသားတွေကို ကော်ပီကူးပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မိမိခေါင်းထဲပေါ်တဲ့စာကြောင်းကိုလည်း ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ အဲလောက်တော့ကူညီကြပါ။ ဘာမှ မလုပ်ပဲ လက်ပိုက်မကြည့်ပါနဲ့။
☀ မွတ်ဆလင်ဝါဒ- အလိုမရှိ။
☀ မွတ်ဆလင် လူရမ်းကားဝါဒ - ကျဆုံးပါစေ။
☀ မွတ်ဆလင်ဝါဒကို ဆန့်ကျင်ရေး.. . ဒို့အရေး..ဒို့အရေး..ဒို့အရေး။
☀ ကုလားဆိုင်တွေကို ဆန့်ကျင်ရေး … ဒို့အရေး..ဒို့အရေး..ဒို့အရေး။
☀ Pedophilia Be Upon
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 8:40 AM
That is because muslims are dogs. They hate those amongst whom they live even as they expect those who they live amongst to give them fair treatment. MUSLIMS ARE HYPOCRITICAL DOGS. THEY ARE BIGOTS. THEY ARE HATEFUL. THEY THINK OTHERS ARE LOWER THAN THEY.
I wish mohammad was never born and islam was never happen.